That's so good, right?: Are you born gay? မွေးကတည်းက (ဂေး) ဖြစ်နေတာလား
လူအများ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားလာကြတာကတော့ "လက်ရှိ လိင်သတ်မှတ်ချက်ကို ကာယကံရှင်ရဲ့ သဘောဆန္ဒနဲ့ ပြောင်းလို့ ရမလား-မရနိုင်ဘူးလား" ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို လိင်တူစိတ်ရှိနေသူတွေကို ကူညီပြုပြင်ပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ကြားမှာ အမြင် (၂) မျိုး ကွဲနေတယ်။ Psychological reparative methods စိတ်ပိုင်းကုသနည်းနဲ့ Religious healing methods ဘာသာရေးနဲ့ ကုသနည်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
"လူတယောက်ရဲ့လိင် (ကျား) လား၊ (မ) လား ဆိုတာဟာ Sexuality pre-determined အစကတည်းက ပါလာပြီးသား ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ အချိန်မရွေးလဲ ပြောင်းသွားနိုင်တယ်" ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်ခံလာနေကြတယ်။
American Psychological Association (APA) အမေရိကန် စိတ်ပညာအဖွဲ့ကြီးရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်က "လိင်တူချင်း စိတ်ဝင်စားခြင်းသည် စိတ်ရောဂါ မဟုတ်။ (ဂေး)၊ (လက်စဘီယံ)၊ (လိင်နှစ်ခွ) မှန်သမျှသည် စိတ်ဝေဒနာဖြစ်သည်၊ ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်နေသဖြင့် လိင်ပြောင်းလဲဘို့ ကုသရန်လိုအပ်သည်ဟူ၍ ဖေါ်ပြချက်မှန်သမျှကို ဆန့်ကျင်သည်။"